Anosizato Nirodana tampoka ilay trano vao namboarina
Trano lehibe iray misy rihina telo no fantatra fa nirodana tampoka omaly folakandro tokony ho tamin’ny 03 ora teny Anosizato Andrefana,
distrikan’Antananarivo Atsimondrano. Tsy mbola fantatra mazava izay antony nahatonga ny firodanana raha araka ny loharanom-baovao azo. Ny hany fantatra dia mbola eo an-dalam-panamboarana ity trano ity. Tsy nisy kosa ny naratra na ny aina nafoy. Eritrteritry ny maro ny hoe tsy nety ny fotoana nisafidianan’ny tompony ny nanamboarana azy. Tafiditra ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fahavaratra tanteraka mantsy isika ankehitriny. Eo ihany koa ny hoe : mety ny fototry ny trano no tsy nahazaka azy….Mila mitandrina tsara rehefa hanao trano. Efa vidina 100 Ar mantsy ny iray amin’ny biriky amin’izao eny Anosizato eny raha 17.000 Ar ny iray lasaka amin’ny simenitra, fitaovana izay marihina fa tsy mitsahatra ny miaka-bidy.